1 Top Software
Top 10 emulators Dreamcast - ciyaari Mame Multiple kulan Machine Arcade on your computer iyo mobile
Dreamcast waa 6aad jiilka Console saartay Sega bishii November 1998 ee Japan iyo 1999 in dhulal kale. Waxay ahayd soo galo marka hore in jiilka 6 consoles'ka ciyaarta video horaysa Playstation 2, Madaxweyne Siilaanyo iyo GameCube. The teknoolajiyada cusub oo badan Sega Dreamcast isticmaalo Mana aanan arkin in consoles'ka ciyaarta video. Waxaa ka mid ah isku xirnaanta internet iyo drive gudaha adag. Emulator Dreamcast waa software in waddaa on Dreamcast Sega ah. Dreamcast ayaa la joojiyey 3 sano keliya ka dib sannadkii 2001.
Xasuusta 16MB RAM ugu weyn, 8MB Video RAM IYO 2MB RAM dhawaaqa.
Pad Dreamcast gacanta: gacanta ku jiho digital iyo analoogga, kiciya ee analoogga dual, xogta nidaamka xasuusta dalwaddii badbaadin unit.
Operating System: Customized Microsoft daaqadaha CE iyo Sega Operating System.
Oo caan ku Games ku saleysan Dreamcast.
Kulan Shenmue waa sheeko ka mid ah Ryo Hazuki ayaa baaris aarsiga ee ka dhacay Japan iyo Shiinaha dabayaaqadii 80 ee. In kulankaan, gamer ka baadhayaa adduunka faahfaahsan wada Xarakada dalwaddii. Shenmue ayaa loogu codeeyay kulankii ugu fiican Dreamcast.
Xasaasi ah Arcadia
Ciyaarta waa sheeko ka mid ah burcad badeeda hawada Blue anshaxa xun, Vyse iyo saaxiibbadiis oo waa masterpiece Agtiisa Ajir Weyn ay ku jiraan adduunka weyn, characters ihi, oo barwaaqadii oo qarsoon in la ogaado. Waxa kale oo ku jira in markabka dagaalka lagu soo dhacay markab iyo biimayn ah in uunan oggolaan doonin in aad u tagto. Dadka qaar waxay soo wici kulankaan ka Gadzhiyev Fantasy Final ugu fiicneyd abid ka dhigay.
Kulankaan ayaa qoreysa characters kala duwan, sida habka ciyaarta kala duwan iyo qaar ka mid ah bandhigyo aad u cajiib ah. Element ayaa dacayadeed-biimayn ee ciyaarta taas oo ka dhigaysa waa mid aad u xiiso inuu u ciyaaro.
Dagaalka ayaa hub ku salaysan ee ciyaarta taas oo ka dhigaysa waa noole oo la qabatimo inuu u ciyaaro. Nidaamka dagaalka ee kulankaan uu ahaa mid yaab leh loo fuliyay oo loogu talagalay dadka cusub oo si isku mid ah halyeeyada. Ciyaarta ayaa sidoo kale buuxiyey oo ku yaal a collection of hababka ciyaarta oo ay ku jiraan baaris ah hab ciyaareed cajiib ah oo ka kooban kale.
Tani waa ciyaar Tacaddi iyo sida duurgal ah, shaqadaada ahaa in ay ka baxaan kaniisadda si ammaan ah markab gumeysi iyo galaan dusha sare ee caalamka cusub Ragol. Si kastaba ha ahaatee, caalamka aan ahaa oo dhan ee ku lug leh dagaalka iyo ammaan waqtiga dhabta ah la abuuray oo dhan.
Maxaad Dadku waxay rabaan Dreamcast Emulator ah.
Waxa uu goobta xaasidnimo Dreamcast waa mid aad u firfircoon waxayna siisaa nolosha danbe wayn in sida mashiinka cajiib ah oo outstripping PS2 sida mashiinka ah madadaalada oo dhan-wareega. Faa'iidada in isagoo emulators on Dreamcast waxaa ka mid ah:
Emulators Dreamcast guud ahaan waa ka sii sahlay si aad u hesho socda badan version PC ah.
Iyadoo PC ah, qofka xukuma ugu weyn waa keyboard halka qofka xukuma Dreamcast waa ka fiican, wax ku ool ah iyo waxyaabo badan oo ku haboon.
Sida badan Ajandooyinka Dreamcast Emulators ordi karaan?
Nidaamka ka hawlgala Macintosh
10. caan ku Dreamcast Emulators
Chankast waa emulator ah oo loogu talogalay nidaamka Dreamcast ah. Waxay ahayd emulator ugu horeysay Dreamcast in uu ordo kulan ganacsi. Emulator Tani waxaa si gaar ah loogu talagalay Windows XP ama 2003. Waxaa hoos daaqadaha 9x ama ME ma shaqayn doonaa, oo waxaad la kulmi doontaa dhibaato qaar ka mid ah waxaa la isticmaalayo hoos daaqadaha 2000.
Shuruudaha ugu yar:
Pentium 4 iyada oo ugu yaraan 1.6 GHZ
Windows XP ama 2003 (ma aha wax kale ee hoos shaqayn doona)
Card graphic Xoog sida Nvidia ama Ati
DreamEMU waa emulator Sega Dreamcast ah in ka ciyaari kara processor goodhiyaha iyo kulan homebrew. Waxaa waddaa on boosteejo daaqadaha. Waxaa hadda muujinaysaa furitaanka screen Sega iyo goodhiyaha qaar ka waddaa si tartiib ah. Sida ugu dhaqsiyaha badan, waxaan filaynaa inay soo aragto calaamadaha ugu horeeya ee kulan ganacsi.
NullDC ahaa emulator Sega Dreamcast u win86, waxaana haatan la xafidayaa ee github. Work hadda sameeyo reicast ( https://github.com/reicast/reicast-emulator ) iyo halka NullDC weli waa xulasho wanaagsan u xaasidnimo Dreamcast daaqadaha / reicast x86 waa meesha horumarinta mustaqbalka waa.
Download link: 1.0.4-389.zip NullDC
Demul waa emulator Sega Dreamcast in ay awood u ciyaaro ganacsi xawaare aad u dheereeya. Markii hore horumarinta on emulator waxa loo malaynayay in ay joojiyeen, laakiin waxa uu dhawaan la gaaray shirkad ku salaysan Ruush dhawaan la Alfa taageero Nimco. Waxaa waddaa on boosteejo Windows.
Riyooda ahaa emulator ugu horeysay ee la sii daayay oo ka shaqeeya Dreamcast u PC. Waxaa dajisay Elsemi 2000 goor dambe ilaa bartamihii 2001-. Waxa kaliya ee ka waddaa dhawr goodhiyaha iyo lahayn horumar laga sameeyay in wakhti dheer qaar ka mid ah.
Makaron waa Console Sega Dreamcast iyo Sega Nimco Arcade emulator u OS daaqadaha. Tani emulator Dreamcast la sii daayay on 19-08-2010 oo helay heerka waafaqsan aad u sarreeya. Waa awood u socda kulamo badan oo ganacsi iyo waddaa on Windows madal kaliya.
Icarus waa emulator ugu horeysay ee uu u ciyaaro kulan ganacsiga iyo horumarka ayaa weli socda. Hadda waxaa jira version ma heli karo download sida uu haatan maraya ah dib u dhiska.
Download link: hadda aan la heli karin.
NesterDC waa nidaam madadaalada Nintendo emulator si buuxda u ciyaarin Dreamcast ah. Waa caan ah oo ay waafaqsan fiican. Waxaad keydsan kartaa ilaa iyo 10-goboleedyada iyo screens doorashada falgal ciyaari karo NES sanduuqa farshaxan iyo sidoo kale qaar ka mid ah Gurtida qori jeeda classic. NesterDC ka mid ah hogaamiyayaasha emulator Dreamcast NES.
Inkastoo weli ay si rasmi ah marxalad Beta ah, GENS4ALL horay uu yahay tartame istaahilaa ah Genesis emulator ugu fiican ee Dreamcast ah. Emulator Tani waxay u badbaadin karaa kulan u VMU, wax soo saarka VGA ciyaaraha iyo codes qiyaanoole celiska ah garoomada kulan Genesis.
Waxaa ka jira tiro ka mid ah emulators Spectrum u Dreamcast laakiin mid ka mid ah taagan yahay DreamSpec. Emulator Tani waxay ku yimaado a CDI image pre-diyaar u ah iyadoo in ka badan 200 oo iib ah oo lacag la'aan ah kulan spectrum si sharci ah laga heli karaa gubanaya.
Download link: Download Dreamspec Spectrum Emulator loogu Madaxweyne Siilaanyo Oo Original
Top 9 DOS Emulators - Play DOS Games On Qalabka Kale
> Resource > Emulator > Top 10 emulators Dreamcast - ciyaari Mame Multiple kulan Machine Arcade aad com